MAANHDAL: Ra’iisul Wasaaraha Cusub & Shaqooyinka horyaala – Radio Daljir
MAANHDAL: Ra’iisul Wasaaraha Cusub & Shaqooyinka horyaala
Seteembar 25, 2020 10:00 b 0
Raysal wasaaraha cusub ee Dowladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa 23kii bishaan ku guulaystay codka kalsoonida ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoona balanqaaday sideed qodob inuu xooga saarayo muddo xileedkiisa.
1- Amniga2 – Doorashooyinka .3- Horumarinta dhaqaalaha .4- Cadaaladda iyo Garsoorka .5- Dawlad wanaag iyo la dagaalanka musuq-maasuqa .6- Dib u eegista dastuurka .7- Dhab u hashiisiinta Soomaalida .8- Iskaashiga caalamiga ah.
Dhanka kalle waxaa la iswaydiinayaa sida howlahaas uu ku filan karo maadaama uu yahay raysal wasaarihii ugu waqtiga yaraa muddo xileedka, marka loo eego xiliga madaxwaynaha loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Barnaamijka Maanhadal waxaa ka qayb galaya Marti kala duwan waxaana soo jeedinaya Wariye Maxamuud Cabdi Ibraahim.
MAANHADAL 251 Wararka 23013
Guddoonka labada Aqal oo shaaciyay xilliga la horgeynayo Heshiiska doorashada
Warka Maanta ee maalinka JIMCAHA iyo Cabdinaasir Jeekey (dhegayso)
on Muxuu ka dhashaa Cudurka Gaaska iyo Bacteria-da H. Pylori?Wllo Kula midban Ahay dawo ma u heshay wllo